Fiteny any Iràna - Wikipedia
Ny fiteny ao Iràna dia ahitana fiteny ao amin' ny fianakaviam-piteny maro ka ny maro mpiteny indrindra dia ireo ao amin' ny fiteny indô-eorôpeana sy ny fiteny torkika. Misy vondrom-poko maherin' ny 80 ny any Iràna, izay samy manana ny fiteniny sy ny fomba fiainany ny ao amin' io firenena io, ka ny maro an' isa amin' izany dia ireo mpiteny indô-eorôpeana (ny ankamaroan' ny Iraniana dia miteny fiteny iraniana toy ny fiteny persiana, ny fiteny kiorda na ny fiteny balotsy) sy ny mpiteny amin' ny fiteny torkika (fiteny azery). Samy mahafantatra ny fiteny persiana, fiteny ôfisialin' i Iràna izy rehetra. Ny vondrom-poko lehibe indrindra dia:
Ireo fiteny ao Iràna
Ny fiteny arabo sy ny fiteny anglisy no fiteny vahiny roa tsy maintsy ampianarina any amin' ny sekoly ambaratonga faharoa. Tombanana ho 3 tapitrisa ny isan' ny mpiteny anglisy ao Iràna. Mianatra fiteny rosiana, alemàna ary sinoa ny Iraniana sasany. Ianarana ihany koa ny fiteny hindy-ordo nanomboka tamin' ny taona 2015, satria mifadray ara-barotra betsaka amin' i India sy Pakistàna i Iràna.
Fahita teo amin' ireo olo-manankaja tao amin' ilay firenena sy ny saranga ambony ny fiteny frantsay izay nihen-danja nanomboka tamin' ny taona 1960, ary indrindra hatramin' ny revolisiona islamista tamin' ny taona 1979.
Ireo fianakaviam-piteny ao IrànaHanova
Ireto iereo fianakaviam-piteny misy ny fiteny tenenina ao Iràna:
ny fiteny kaokaziana (toy ny fiteny kartveliana sy ny fiteny tsirkasiana).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_any_Iràna&oldid=1045182"
Dernière modification le 15 Mey 2022, à 15:04
Voaova farany tamin'ny 15 Mey 2022 amin'ny 15:04 ity pejy ity.